inona no casino miaramila
vola maimaim-poana amin'ny casino tsy misy petra-bola
vola maimaim-poana tsy misy petra-bola slots uk
Any Etazonia sy ny miliaridera Filohan'ny Aziatika casino mpandraharaha Bloomberry Resorts Fikambanana dia voalaza fa miatrika federaly fitoriana nandritra ny fanafoanana ny fifanarahana izay dia mba efa nahita ny Global Lalao Filipina LLC manome tolotra ny mafy ny Solaire Resort sy ny Casino inona no casino miaramila antsoina hoe. Araka ny alatsinainy tatitra avy amin'ny Bloomberg news service, ny hetsika hanoherana ny Enrique Razon (sary) dia nametraka ny fanampiny ny Amerikana fialamboly mafy Global Lalao-Pananana amin'ny Fitantanana ny LLC amin'ny ezaka mba hanamafy ny $296.6 tapitrisa fitsarana nampitaina ny Fitsarana Ambony ao Singapore misy 14 volana lasa izay. Ity aloha eo amin'ny fitondrana lazaina fa tonga araka ny mpitory soa aman-tsara nanaporofo fa Bloomberry Resorts Corporation ny alalan ' ny Bloomberry Resorts sy ny trano fandraisam-Bahiny Nampidirina sy ny Sureste Fananana Tafiditra subsidiaries efa mampiasa foanana intsony ny fifanarahana momba ny 500-efitra casino fialan-tsasatra any amin'ny Manila ny fialam-Boly Tanàna distrika inona no casino miaramila. Tampoka fampitsaharana: Ireo Bloomberry Resorts Fikambanana eo ambany fahefan'i voalaza fa nanasonia multi-taona alliance tamin'ny taona 2011 izay efa nahita ny Global Lalao Filipina LLC manome ny efa-kintana Solaire Resort sy ny Casino amin'ny isan-karazany ny asa fitantanana ny fandrakofana tahaka izany ny faritra araka ny endrika, ny fandraisana mpiasa sy asa fanorenana vola maimaim-poana amin'ny casino tsy misy petra-bola. Na izany aza, ny Manila-voatanisa mpandraharaha samy irery nofoanana izany fahatakarana izany enim-bolana monja taorian'ny premiering Filipina toerana ny volana Martsa 2013 ny manonona 'ny tsy fahombiazana ny fifanakalozan-kevitra' sy 'ara-nofo banga' ny filazana vola maimaim-poana amin'ny chumba casino.
Singapore fahombiazana: tsy Faly amin'ny hetsika izany sy ny Global Lalao Filipina LLC taty aoriana nametraka fitoriana tao Singapore mitady fahasimbana sy ny vola lany ary koa mialoha ny famaranana ny vola lany sy ny sarany vola maimaim-poana tsy misy petra-bola slots uk. Ny Fitsarana Ambony ao Singapore taty aoriana no nanaiky ary nahazo ny mpitory tompony sy ny fanaraha-maso ny 921.18 tapitrisa mizara ao Bloomberry Resorts Fikambanana ho toy ny ampahany amin'ny $296.6 tapitrisa ponenana. Mifanohitra amin'izany filazana: Global Lalao Filipina LLC ankehitriny dia voalaza fa nametraka ny hetsika mialoha ny United States Distrika Fitsarana Atsimon'ny Distrika New York manoloana ny filazana fa tsy Bloomberry Resorts Fikambanana na Razon mbola ho fanomezam-boninahitra ny Singapore didim-pitsarana. Ny mpitory dia lazaina milaza fa ny 61 taona Filipiana mpandraharaha manana koa 'nanangana tambajotra midadasika ny akora' ireo orinasa mba hanafina ny fananana any Etazonia mba hahatonga azy ireo ho afaka amin'ny adjudication vola maimaim-poana tsy misy petra-bola poker toerana. Be dia be ny orinasa: 14-tantara Solaire Resort sy ny Casino mipetraka eo amin'ny 21-acre tetika ny tany misy afa-tsy ny momba ny folo minitra fiara avy any Manila ny Ninoy Aquino-Piaramanidina Iraisam-pirenena, izay nandamina ny firaketana an-tsoratra-ny fandikana ny 45 tapitrisa ny mpandeha amin'ny taona 2018.
Ny lehibe fananana lafin-javatra maro ireo trano fisakafoanana sy fisotroana ankoatra ny 1,900-toerana fijanonana garazy, an-kalamanjana dobo sy ny spa, ary trano fanaovana fanatanjahan-tena sy ny 199,000 toradroa ft casino fanatitra ny fifantenana ny eo ho eo ny 1400 slots, ary 300 lalao latabatra..
Slot milina tsara vintana ody
Slot milina grand jackpot mpandresy